Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku garaacay garsoorayaasha Premier League abaalmarinta rigoorooyinka “aan la garaneyn” ee Manchester United.
Klopp ayaa su’aal ka keenay sababta ay Manchester United u heshay rikoodhkii kulankii Aston Villa jimcihii markii garsoore Andre Marriner uu Paul Pogba siiyay abaalmarin muuqata.
Isaga oo la hadlaya warbaahinta markii ay kooxdiisu 3-dii kulan ee ay ciyaartay wax guul ah gaarin kulankii ay 1-0 kaga badisay Southampton, waxa uu sheegay in kooxdiisu ay lahayd laba rigoore qaybtii dambe markii uu Georginio Wijanldum darbadiisa laga leexiyay birta. Wuxuu gacanta ka laaday Jack Stephens, Sadio Mane ayaa casaanka loo taagay kadib markii uu qalad ku galay Kyle Walker-Peters lugta dambe.
Klopp ayaa muujiyay inuu rumeysan yahay in haddii koox kale, gaar ahaan Manchester United ay ciyaari laheyd, in la abaalmarin lahaa laba rigoore: “Haddii ay ahaan laheyd kooxaha kale, Mane wuxuu heli lahaa rigoore. Kubadda gacanta, ma garanayo cidda sameyn karta ii sharax (sababta ay u shaqeyn weyday).
“Waxaan aragnay dhacdada Mane si aad u wanaagsan waxayna umuuqatay rigoore cad. Waxaan u tagay garsooraha afraad oo aan waydiiyey in la hubiyay oo uu igu yidhi mar horaba waa la hubiyey wax ciqaab ahna majiro. Taasi boqolkiiba boqol ayey run ahayd, haddana qof waa inuu ii sheegaa sida ugu dhakhsaha badan ee ay uga eegeen dhinacyo kala duwan. “
Tababare Jurgen Klopp ayaa sheegay in Manchester United ay tahay koox ka sahlan in goolal laga dhaliyo kooxdiisa wuxuuna yidhi: “Waxba ma bedeli karno, laakiin waxaan maqlay in Manchester United ay leedahay laba sano ka goolal badan kuwa aan haysano shan sano iyo badh. “Wax fikrad ah kama haysto tani waa qaladkeyga iyo sida ay u dhici karto.”
Xiriirka kubada cagta ayaa go, aansaday go, aanka uu Jurgen Klopp ku mamnuucay garsoorayaasha iyo go, aanadooda laakiin tababaraha Liverpool ayaa sheegay in aan la ganaaxi doonin ama la ganaaxin.
20 Meals That Struggle the Iciness Blues